Glory Archives — TRIP LEE - SITE RASMIGA AH
Ku faana Ku faana Ku faana Ku faana Ku faana Ku faana Ku faana Ku faana Ku faana Ku faana Ku faana Ku faana Ku faana Ku faana
Hadalka kibirsan iyo ammaanta Ilaah
Waan jeclahay kids. Mid ka mid ah sababaha aan jeclahay kids waxaa ugu wacan inay na tusi nafteena. Waxay tahay sida muraayadaha yar. Ha iga kuu sheegi waxa aan ula jeedo. Kids leeyihiin badan oo dhan dhibaatooyin la mid ah waxaan heysanaa, laakiin dhibaato waa kuwa kaliya badan oo dheeraad ah iska cad, maxaa yeelay, iyagu ma ay yaqaaniin sida loo weli iyaga qarin. Tani waa run ahaantii cad marka kids wax ay ma u maleeyeen inay sameeyaan sameeyo.
Waligaa ma aragtay wax kid taabashada ah ay u maleeyeen ma taaban? Waxay eegi doonaa agagaarka si loo arko haddii aad raadineyso weeyna. Iyagu ma daryeesho haddii kid kale waxaa raadinaya; waxay kaliya ma doonayaan in dadka waaweyn ama waalidka si ay u arkaan. Maxaad ay sameeyaan in, in kastoo? Maxaa yeelay, iyagu waxay ogaan aad tahay mas'uul, oo aysan rabin in aad si aad u ogaato sababta oo ah waxay og aad tahay mid ka mid ah ay u leeyihiin in ay ka jawaabaan si ay u.
Dadka waaweyn waa si la mid ah. Inta aynu ku jirno OK wax aan aan u malaynay in la sameeyo samaynaya, ilaa iyo inta qofka aanu u leeyihiin in ay ka jawaabaan si uusan heli kuma soo baxo. Waxaad tahay farxeen si loo dedejiyo ilaa aad ka aragto gaysteen ka hor. Waxaa laga yaabaa in aynu ku jirno faraxsanahay in aan shaqada ka tago hore ilaa iyo inta uusan naga Tababaraha heli kuma soo baxo. Waxaa laga yaabaa in qaar ka mid ah oo naga mid ah qishaan imtixaannada iyo inta uu professor ma qabsado…